Chii chichaitika bhizinesi mhedzisiro mu2018? | Ehupfumi Zvemari
Chii chichaitika bhizinesi mhedzisiro mu2018?
Imwe yekiyi yekuona iyo stock market shanduko mune rino chiitiko maakaundi ebhizinesi anounzwa nemakambani akanyorwa mune yega yega kota. Iyo paramende yekukosha kwakakosha kuitira kuti mitengo yako tora maitiro kana imwe. Kusvika padanho rekuti vatengesi vazhinji vatore iyi yakasarudzika nzira yekupinda nekubuda mumisika yezvemari nevimbiso huru yekubudirira. Hazvishamisi kuti isu tiri kutaura nezve imwe yeakavimbika uye data dhata iyo misika yemari inopa. Saka hazvishamise, nekudaro, kuti yavo yemutengo mutengo unowanzoenderana neiyi ongororo iyo makambani anofanirwa kupfuura kana pagore.
Zvakanaka, mhedzisiro yebhizimusi yegore rapfuura yanga yakanaka kwazvo. Nekusangana nekukura kwakatenderedza 15% zvichienzaniswa negore rapfuura. Nekudaro, kudzikira kwave kuonekwa maererano neruzivo rwekutanga kwemakota maviri egore. Iko bhizinesi zviitiko yakakura pamusoro pe20% mazinga. Ichi chikamu chekuongorora chiri kunetsekana chikamu chakanaka chevatengesi. Mupfungwa yekuti ivo vanofunga kuti chikamu chakanaka cheupfumi kutenderera muSpain chakatodzikiswa. Zvichava zvakakosha kutarisa kuti mhedzisiro yebhizinesi yekota yekutanga yegore idzva ichave yekuyera mamiriro chaiwo emakambani eSpanish.
Chimwe chiitiko chinogona kuve chakakanganisa mibairo iyi mhedzisiro yezvinonzi Dambudziko reCatalan. Kusvika padanho rekupedzisira iro rinokanganisa accounting yemakambani akanyorwa mumari inoshanduka. Kwete chete neavo vanobva kuCatalonia, asiwo nevamwe vane hukama hwekutengesa neichi chikamu chenharaunda yenyika. Chero zvazvingaitika, isu tichafanirwa kunge tichitarisira nezve izvo zvinogona kuitika neaya data mu2018. Hazvishamise, hazvina kutongwa kunze kuti pane kudzikira munhoroondo dzevamwe emakambani aya. Chinhu chinokanganisa mutengo wezvikamu izvo zvaizodzikira zvakanyanya nekuda kweshanduko mune zvinotarisirwa.
1 Zvinotarisirwa zvemhedzisiro mu2018
2 Unofanira kuita sei?
3 Matanho ekutsikisa data
4 Chii chekuita nezvakanaka mhedzisiro?
5 Zvimwe zvakanaka zvekushandisa kwayo
Zvinotarisirwa zvemhedzisiro mu2018
Chero zvazvingaitika, fungidziro dzegore idzva iri dzinoratidza kuti mibairo yemubhadharo ichaenzana Semhedzisiro yekuwedzera kwakaperera kwesimba rehupfumi kuri kuitika. Mupfungwa iyi, iyo Bankinter yekuongorora dhipatimendi inoratidza kuti ichiri mune nzombe chikamu mune hupfumi hwenyika dzese. Ichi chinhu chinofanirwa kubatsira mari dzakatenderedza pasirese kusimuka mhiri kwebhodhi munguva ino. Kunyangwe mune zvese zvingangodaro zviri zvishoma pane izvo zvakamboitika mune apfuura maekisesaizi.
Mhedzisiro yekota yekutanga ichave yakakosha kwazvo mukugadzirisa shanduko iyo inotorwa neSpanish equities inotora panguva yakanaka chikamu chegore. Ichave imwe ye data iro vashoma uye vepakati varimi vanozoziva kwazvo. Kusvika padanho rekuti chero kutsauka kubva pane fungidziro zvinogona kukonzera shanduko kamwe kamwe mumutengo wemutengo. Ehezve, neimwe nzira kana imwe uye kuti ichagadzira izvo mumabasa iwe unogona kuwana mari yakawanda. Asi nekuda kwechikonzero chimwe chete, zvakare kusiira iwe maeuro akawanda kupfuura anodikanwa mune yekutengesa mari pasi.
Kuti utore mukana weiyi data icha buda muna 2018, hauzove nesarudzo kunze kwekutora nhevedzano yemazano anozobatsira kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire. Izvi ndizvo zvimwe zvakakosha.
Chero kuvandudzwa kwezvakafanotaurwa kunofanirwa kushandiswa unganidza nzvimbo mune yakasarudzika tsika.
Iwe unogona kutevedzera chirevo chinonongedzera icho iwe chaunofanirwa tenga neguhwa uye tengesa nenhau. Mune zviitiko izvi zvinounza iwe chikuru chinoshandiswa mukushanda.
La volatility Mumazuva apfuura kuburitswa kwemhedzisiro yakanyanya kukwirira uye ichakubatsira iwe kuti uite mune imwecheteyo yekutengesa chikamu.
Kazhinji iyo enhempe Izvo hazvikanganise hunhu hwakawanda pamusika wekutengesa wepasirese uye zviri chaizvo mune izvo zvirevo uko zvichave zvakakodzera kuisa njodzi yako capital.
Iwe unofanirwa kurangarira kuti izvi zviwanikwa zvebhizinesi zvinogadzirwa kana pagore. Naizvozvo, iwe unenge uine mikana yakati wandei kuitira kuti ugone kubatsirwa kubva mukufamba nenzira inogutsa.
Izvozvi tiri mu mamiriro ekuwedzera saka chero kushamisika kwakashata kucharangwa zvakanyanya nemisika yemari. Nenjodzi dzekudonha kwakapinza mumisika.
Usaedze kumhanyisa mashandiro kusvika pahuwandu sezvaunomhanya nenjodzi yakakomba ye batwa mune hutsika hwawakasarudza munguva idzodzo. Kunyangwe pasina iwe uchikwanisa kugadzirisa zviri nyore mitengo yekutanga, sezvaunoda kubva pakutanga.
Matanho ekutsikisa data
Chero zvazviri, iwe unogona kutora mukana kuburitswa kwemhedzisiro yemakarongwa ebhizinesi mitsara ku kuwedzera mashandiro mumisika yemari. Nechinangwa chakajeka chaizvo icho chiri chekuti purofiti kufamba kwako kwese mumusika wemasheya. Uine mikana mikuru yekuti iwe unogona kunatsiridza yako yazvino account balance kubva kune aya mafambiro. Kuburikidza nezviito zvinotevera zvatinokufumura pazasi.
Chimwe chezvinangwa zveiyi zano kuve mune yakanakisa chinzvimbo ku gadzira hombe capital capital kubva pazano rakasarudzika. Ichave iri nguva yemavhiki mashoma iwe yaunofanirwa kuunganidza masheya uye uatengese iwo pamitengo yakakwira kupfuura iyo yakataurwa kusvika zvino.
Iyo nguva yekuburitswa kwebhizinesi mhedzisiro inogona kushandiswa kune bvisa zvinzvimbo. Kunyangwe izvi zvichinyanya kufadza sezvo zvakakomba zvigadziriso zvinogona kugadzirwa kuyedza kugadzirisa mutemo wekupa uye wekuda. Izvo hazvina basa kuti iwe unosuwa imwe yekuwedzera iyo inogona kuitika mumitengo.
Vezvenhau vane hunyanzvi vanowanzo kupa ruzivo rwusinganzwisisike nezvekuti mibairo iyi ichave sei. Iwe unogona kutora mukana weichi chokwadi kutora chimwe chiyero kana chimwe mumisika yemari. Zvichava a ruzivo rwakakosha izvo zvinogona kukubatsira iwe kuita kuti mashandiro ako pamusika wemasheya abatsire. Uye nenzira iyi dzivisa njodzi dzisiri madikanwa mukutora chinzvimbo munzvimbo dzakachengetedzeka.
Zvese izvo mimwe mhedzisiro pazasi pezvaitarisirwa yakagadzirwa inofanirwa kushandiswa kugadzirisa zvinzvimbo nekukurumidza sezvazvinogona. Kwete pasina, unomhanyisa njodzi yekuti unogona kusiya maeuro mazhinji munzira. Iwe hauzove neimwe mhinduro kunze kwekudzivirira iyi mamiriro isingadiwe nevashambadzi vadiki nepakati.
Chii chekuita nezvakanaka mhedzisiro?
Kana pakupedzisira chiitiko ichi chikaitika, haufanire kutya zvakare kuvhura nzvimbo munzvimbo dzemari. Kwete pasina, ndiko kufambira mberi kwe ipfupi uye yepakati term uptrend. Uine dzimwe sarudzo dzekuwana mabhenefiti pasina zvakanyanya kuita iwe. Zvirinani kusvikira zuva nyowani panobuda zvabuda zvekota inotevera. Iwe unenge uine nguva yakakwana yekubuda mukufamba uku mumisika yequity. Sezvazvakaitika nemamwe emakosheni akakosha eiyo inosarudzika index yeSpanish stock market. Semuenzaniso, naFerrovial kana Inditex sevamiriri veiyi nzira yekudyara.
Kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kumirira kuti iyi data ibude uye uve nekuchengetedzeka kukuru mune yega yega mashandiro. Ichokwadi kuti iwe ucharasikirwa chikamu cheiyo upside zvinogona, asi zvichave zvakakodzera kuti usazviisa pangozi zvakanyanya pamberi pekuchinja kamwe kamwe mumutengo. Chinhu icho pasina mubvunzo chinogona kuitika kwauri usingashandisi yakasarudzika zano. Chokwadi zvichaita kuti iwe uwane mari mushure megore. Mune kumwe kana kwakawanda mashandiro akaitwa panguva ino.
Zvimwe zvakanaka zvekushandisa kwayo
Nechokwadi chese chekuti iwe urikufunga kuti ndeapi mabhenefiti aunogona kuwana kubva kuchirongwa ichi kubva zvino zvichienda mberi. Zvakanaka, zvichave zvinoshanda kwazvo kuti iwe utarise kuti ndezvipi zvimwe zvezvipo izvi zvinogona kukubatsira iwe kuwana mari yakawanda kubva panguva dzino chaidzo. Cherekedza nekuti unogona kuchida pane imwe nguva kana imwe.
Iyo ndeimwe yeanoshanda masisitimu e chengetedza hupfumi hwako. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinodzivirira kamwe kamwe kudzikira kufamba. Zvirinani kwemavhiki mashoma apo izvi zvinokanganisa pamutengo wemugove zvichaitika.
Inogona kuve nhanho yekuti zviyero zvifambe mukukwirisa kweimwe kusanzwisisika kushandisa akanakisa ekudyara nzira. Uine mashoma margin ekukanganisa izvo zvinokubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvinoteedzerwa kubva chero nguva yekugara.
Unogona kudzokorora mashandiro aya kangani kaunoda kuti iri basa re data iro rinodzokororwa mune dzakawanda zvekuchengetedzeka zvakanyorwa muSpanish equities. Kunze kwechinhu chehunyanzvi icho zvinhu zvemari zviripo panguva yakatarwa yekuburitswa kwavo.
Pazuva rimwe chete rekuburitswa kwayo, a kusagadzikana kukuru mumitengo uye kuti inogona kuve inonakidza mamiriro kuti iwe uite kutengesa. Ndokunge, shanda kuburikidza nekutenga uye kutengesa mune imwecheteyo yekutengesa chikamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chii chichaitika bhizinesi mhedzisiro mu2018?
Nei vhoriyamu yakakosha kwazvo muhomwe?
Mikana yebhizinesi mumusika wekutengesa wegore rino